ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်လူငယ်များ၏အမြင်များ (၂၀၁၅) - သင်၏ ဦး နှောက် On Porn
'' ဒါဟာသင့်ရဲ့မျက်နှာပဲရှိတယ်အမြဲဖွင့် ': porn အပေါ်လူငယ်များရဲ့အမြင်များ (2015)
လိင်ကျန်းမာရေး။ 2015 မေလ4။ Doi: 10.1071 / SH14225 ။
Walker က S နဲ့, ဗိမာနျတျော-Smith က M ကို, Higgs P ကို, Sanci L ကို.
Shelley Walker က A B C D , Meredith ဗိမာနျတျော-Smith က C ပတေရုသ Higgs A B နှင့်လီနာ Sanci C
တစ်ဦးက Curtin University မှအမျိုးသားဆေးဝါးသုတေသနအင်စတီကျု, ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဌာန, မဲလ်ဘုန်းမြို့ရုံး Suite 6, 19-35 Gertrude လမ်း, Fitzroy, Vic ။ 3065, သြစတြေးလျ။
B က Burnet Institute မှ, လူဦးရေကနျြးမာရေးအတှကျအရေးစင်တာ, 85 ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လမ်း, မဲလ်ဘုန်း, Vic ။ 3001, သြစတြေးလျ။
မဲလ်ဘုန်း, အထွေထွေအလေ့အကျင့်များဦးစီးဌာနကို C တက္ကသိုလ်, 200 ဘာကလေလမ်း, Carlton, Vic ။ 3053, သြစတြေးလျ။
စာရေးသူကသက်ဆိုင်ရာ: D ။ အီးမေးလ်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
နောက်ခံသမိုင်း: ခေတ်ရေစီးကြောင်း porn ၏အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးသဘောသဘာဝရှိပြီးအဖြစ်ညစ်ညမ်းမှလူငယ်များရဲ့ထိတွေ့မှု, တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ခေတ်ပြိုင်အကြောင်းအရာလူငယ်များသူတို့ကသဘောကျတယ်သို့မဟုတ်မရှိမရှိအကြမ်းဖက် porn နှင့်ထိတွေ့နေကြဆိုလိုတယ်, ထိုသို့မရှိတော့သူတို့ထိတွေ့ပေမယ့်အစားသည့်အခါပါလိမ့်မည်ဟုတ်မဟုတ်၏မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နည်းလမ်းများ: ရည်ရွယ်ချက်နမူနာအသုံးပြုခြင်း, 33 In-depth ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်း sexting ၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းစူးစမ်းဖို့, 15-20 အတွက် 2010-11 နှစ်ပေါင်းအသက်လူငယ်များနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ကနဦးတွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ်အတွင်းပါဝင်သူတစ်ဦးအလယ်တန်း, မျှော်လင့်မထားတဲ့တွေ့ရှိချက်အဖြစ်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏ခေါင်းစဉ်ကြီးပြင်း။ ဆွေးနွေးချက်တွေ sexting နှင့်ညစ်ညမ်းအကြားအရေးပါသော link ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ သုတေသန၏ inductive သဘောသဘာဝစုံစမ်းရေးဒီအသစ်နှင့်အရေးကြီးသောဧရိယာစူးစမ်းခံရဖို့နိုင်ခဲ့သည်ဆိုလိုသညျ။
ရလဒ်များ: ဒေတာကို thematic coded နှင့် grounded သီအိုရီချဉ်းကပ်သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များကိုအများအပြားလူငယ်များနှစ်ဦးစလုံးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့သတိလစ် porn ထိတွေ့ဖြစ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။ ထို့အပြင်သူတို့အမြိုးသမီးမြားကိုကျော်ယောက်ျားရဲ့အာဏာနှင့်လက်အောက်ငယ်သားအားဖြည့်ကြောင်း gendered စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။ porn ထိတွေ့မှုများအကြားတစ်ဦးက link ကိုလူပျိုတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အကြည့်ရှုအားပေးလျက်ရှိသည်အရာကိုကိုက်ညီမှအမျိုးသမီးငယ်ရဲ့ဖိအား, ထိတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံး: ရလဒ်များဤလူငယ်လူများ၏ရှုထောင့်ကနေညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏ပြဿနာကိုစူးစမ်းဖို့အနည်းငယ်မကြာသေးမီအရည်အသွေးသြစတြေးလျလေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ပေးထားသိသိသာသာရှိပါတယ်။ ပညာတတ်များ, မိဘများနှင့်ကျန်းမာရေးပံ့ပိုးပေးဘို့အရေးကြီးသက်ရောက်မှုတွေ porn အတွက်ဖော်ပြမက်ဆေ့ခ်ျကိုစိန်ခေါ်ဖို့ငယ်ရွယ်လူတို့အဘို့အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းအပါအဝင်ထင်ရှား, သူတို့၏အမြင်များပညာရေးနှင့်အများပြည်သူဆွေးနွေးငြင်းခုံ၌ကွားခံရဖို့အတှကျပါပြီ။
Smith C၊ Attwood အက်ဖ်။ အက်ဖ်။ အက်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလေ့လာခြင်း၊ သုတေသန၊ အပြောအဆိုနှင့်လူငယ်များ၏လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာဇာတ်လမ်းဗြိတိန်ပြည်ထဲရေးရုံးမှပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လိင်ပညာရေး 2011; 11: 327-37 ။
 Melrose M. ၂၁ ရာစုပါတီဝင်များ - လူငယ်များနှင့်ထောင်စုနှစ်သစ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှု ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးမှုဗြာ 2013; 22: 155-68 ။
 Malamuth မိုင်။ အပြာစာပေ။ Smelser NJ, Baltes PB, အယ်ဒီတာများ။ လူမှုရေးနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံများဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ ၁၇ နယူးယောက် - Elsevier; 17 စစ။ 2001-11816 ။
 Ropelato J. အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာစာရင်းဇယား။ အွန်လိုင်းမှာရရှိနိုင်ပါ http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html [10 အောက်တိုဘာလ 2014 မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု] ။
 Tancer ခ။ ကလစ်: လူသန်းပေါင်းများစွာသည်အွန်လိုင်းတွင်ဘာလုပ်နေကြသနည်း၊ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသည်။ နယူးယောက်: Hyperion; 2008 ။
 G. Pornland ညစာစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ကို porn ကမည်သို့ခိုးယူသွားသည်ကိုဖော်ပြသည်။ ဘော်စတွန် - Beacon Press၊ ၂၀၁၀
Thornburgh D၊ Lin HS၊ အယ်ဒီတာများ။ လူငယ်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အင်တာနက်။ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ - အမျိုးသားအကယ်ဒမီစာနယ်ဇင်း၊7။
 Papadopoulos L. လူငယ်များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ အွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ပါ: http://dera.ioe.ac.uk/10738/1/sexualisation-young-people.pdf [23 စက်တင်ဘာလ 2014 မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု] ။
 Bryant C. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အန္တရာယ်။ ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုတရားစီရင်ရေး ဦး တည်ချက်များနှင့်ပြ.နာများ 2009; 368: 1-6 ။
 ဘရောင်း JD, L'Engle KL ။ X- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောလိင်မှုဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများသည်အမေရိကန်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထင်ရှားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ Community Res 2009; 36: 129-51 ။
Bleakley A၊ Hennessy M, Fishbein M, Jordan A. နည်းလမ်းနှစ်ခုလုံးအလုပ်လုပ်သည်။ မီဒီယာတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်မှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှု။ မီဒီယာ Psychol 2008; 11: 443-61 ။
 ရေလွှမ်းမိုးခြင်း။ M. သြစတြေးလျမှလူငယ်များအကြားညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ J ကို Sociol 2007; 43: 45-60 ။
Hald GM၊ Kuyper L၊ Adam PCG၊ de Wit JBF  ကြည့်ရှုခြင်းကဘာလုပ်သလဲ။ ဒတ်ခ်ျဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များနှင့်လူကြီးလူငယ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ J ကိုလိင် Med 2013; 10: 2986-95 ။
 Crabbe M၊ Corlett Er မညီမျှမှုကို Eroticising ။ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု Res Center က Vic 2010; 3: 1-6 ။
 Boyle K. အလွဲသုံးစားမှုကိုထုတ်လုပ်ခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများကိုရောင်းသည်။ အမျိုးသမီးများနေ့လုံး Int ဖိုရမ် 2011; 34: 593-602 ။
 Bridges AJ၊ Wosnitzer R, Scharrer E, Sun C, Liberman R. Aggression နှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ - လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ - အကြောင်းအရာဆန်းစစ်လေ့လာမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေ။ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ 2010; 16: 1065-85 ။
Gorman S၊ ဘုန်းတော်ကြီး Turner E၊ Fish JN ။ အခမဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသောအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ - ယုတ်ညံ့သောလုပ်ရပ်များသည်မည်မျှပျံ့နှံ့နေသနည်း။ Gend ကိစ္စများ 2010; 27: 131-45 ။
Willoughby BJ၊ ကာရိုး JS၊ နယ်လ်ဆင် LJ၊ Padilla-Walker LM ။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလိင်အပြုအမူ၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားဆက်နွယ်မှု။ အစွန်းရောက်ကျန်းမာရေးလိင် 2014; 16: 1052-69 ။
 Allen M, D'Alessio D, Brezgel K. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ ၂ ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသော Meta-analysis သည်ထိတွေ့မှုပြီးနောက်ကျူးကျော်မှု။ Hum Community Res 1995; 22: 258-83 ။
 Luder MT, Pittet I, Berchtold A, Akré C, Michaud PA, Surís JC ။ ဆယ်ကျော်သက်များအကြားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုများ - ဒဏ္myာရီလောသို့မဟုတ်အဖြစ်မှန်လော။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2011; 40: 1027-35 ။
 ရေလွှမ်းမိုးခြင်းအမ်။ ကလေးငယ်များနှင့်လူငယ်များအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများရိုက်ခတ်မှု၏ဆိုးကျိုးများ။ ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးမှုဗြာ 2009; 18: 384-400 ။
 Szymanski DM, Stewart-Richardson DN ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဆက်နွယ်မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများသည်ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးလိင်ကွဲလိင်ခြားသူများကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာများ၌အသုံးပြုသည်။ J ကိုအမျိုးသားများအတွက်လုံး 2014; 22: 64-82 ။
 O'Sullivan LF, Udell W, Montrose VA၊ Antoniello P, Hoffman S. ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်ပတ်သက်သောရှင်းလင်းချက်ကိုသိမြင်မှုဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2010; 39: 1121-31 ။
Gagnon J, Simon W. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့် - လူ့လိင်၏လူမှုရေးအရင်းအမြစ်များ။ ချီကာဂို: Aldine; 24 ။
 Sakaluk J, Todd L, Milhausen R, Lachowsky N, Sexuality in Undergraduate Research Group (URGiS) ကြီးထွားလာသောလူကြီးများတွင်ထင်သာမြင်သာသောလိင်ကွဲဇာတ်ကောင်များ - အယူအဆနှင့်တိုင်းတာခြင်း။ J ကိုလိင် Res 2014; 51: 516-31 ။
 Frith H၊ Kitzinger C. လိင်မှုဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း။ သီအိုရီ Psychol 2001; 11: 209-32 ။
 ရိုင်ယန် KM ။ မုဒိမ်းမှုဒဏ္andာရီများနှင့်လိင်ဇာတ်ညွှန်းများအကြားဆက်စပ်မှု - မုဒိမ်းမှု၏လူမှုရေးတည်ဆောက်မှု။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2011; 65: 774-782 ။
 Hald G၊ Malamuth N၊ Lange T. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ကွဲလိင်ကွဲချစ်သူများအကြားတွင်လိင်အရအခွင့်အရေးများ။ J ကို Community 2013; 63: 638-60 ။
Jensen R၊ Okrina D. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်အကြမ်းဖက်မှုများ။ အွန်လိုင်းမှာရရှိနိုင်ပါ http://new.vawnet.org/Assoc_Files_VAWnet/AR_PornAndSV.pdf [16 စက်တင်ဘာလ 2014 မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု] ။
 ပတေရုသ J ကို, Valkenburg pm တွင်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်? လိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောအွန်လိုင်းပစ္စည်းများနှင့်လိင်အပေါ်အပန်းဖြေသောသဘောထားများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ J ကို Community 2006; 56: 639-60 ။
 Marston C၊ Lewis R .. လူငယ်များအကြားတွင်စအို heterosex နှင့်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်ခြင်း - ယူကေတွင်အရည်အသွေးရှိသောလေ့လာမှုတစ်ခု။ BMJ Open 2014; 4e004996
 Lofgren-Mårtenson L, Månsson SA ။ တပ်မက်သောစိတ်၊ ချစ်ခြင်းနှင့်ဘဝ - ဆွီဒင်ဆယ်ကျော်သက်များ၏သဘောထားနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအတွေ့အကြုံများကိုလေ့လာခြင်း။ J ကိုလိင် Res 2010; 47: 568-79 ။
 Walker S၊ Sanci L, Temple-Smith M. Sexting - အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏သဘာဝနှင့်ဇစ်မြစ်အပေါ်အမြင်။ J ကိုမြီးကောင်ပေါက်ကနျြးမာရေး 2013; 52: 697-701 ။
 ကုလသမဂ္ဂပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (ယူနက်စကို) ။ လိင်ပညာရေးအပေါ်နိုင်ငံတကာနည်းပညာလမ်းညွှန် - ကျောင်းများ၊ ဆရာများနှင့်ကျန်းမာရေးပညာပေးသူများအတွက်သက်သေအထောက်အထား - အသိပေးသည့်ချဉ်းကပ်နည်း။ ပဲရစ် - ယူနက်စကို၊ 34 ။
 Hammersly အမ်အရည်အသွေး - အရေအတွက်သွေးခွဲ Deconstructing ။ Brannen, J, အယ်ဒီတာ၌တည်၏။ ရောစပ်နည်းလမ်းများ: အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်သုတေသန။ Aldershott: Avebury; ၁၉၉၂ ။
 Hansen EC ။ အောင်မြင်သောအရည်အသွေးကျန်းမာရေးသုတေသန: လက်တွေ့ကျတဲ့နိဒါန်း။ Crow Nest: Allen နှင့် Unwin; ၂၀၀၆ ။
 Heath S၊ Brooks R, Cleaver E, အိုင်ယာလန်အီး။ လူငယ်များ၏ဘဝကိုသုတေသနပြုသည်။ London: SAGE Publications Ltd; 37 ။
Mac version 38 အတွက် QSR International Pty Ltd. NVivo အရည်အသွေးအချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆော့ (ဖ်) ဝဲ (Melbourne: Australia) ၂၀၁၀
 Glaser BG, Strauss AL ။ grounded သီအိုရီ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု: အရည်အသွေးသုတေသနများအတွက်မဟာဗျူဟာ။ ချီကာဂို: Aldine; ၁၉၆၇ ။
 Wallmyr G၊ Welin C. လူငယ်များ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင် - ရင်းမြစ်များနှင့်သဘောထားများ။ J ကို SCH သူနာပြု 2006; 22: 290-5 ။
 Powell A. လိင်၊ အာဏာနှင့်ခွင့်ပြုချက် - လူငယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စာမရေးသောစည်းမျဉ်းများ။ မဲလ်ဘုန်းမြို့: ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; ၂၀၁၀
Boyle K. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာတမ်းများသည်အကြောင်းမရှိခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကျော်လွန်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများနေ့လုံး Int ဖိုရမ် 2000; 23: 187-95 ။
 Weinberg MS, Williams CJ, Kleiner S, Irizarry Y. Pornography, normal and empowering ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2010; 39: 1389-401 ။
Grov C၊ Gillespie BJ၊ Royce T၊ Lever J. လိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောကျပန်းအွန်လိုင်းလိင်လှုပ်ရှားမှု၏ရလာဒ်များ - အမေရိကန်အွန်လိုင်းစစ်တမ်း။ Arch လိင်ပြုမူနေ 2011; 40: 429-39 ။
Wolak J, Mitchell K, Finkelhor D. အွန်လိုင်းလူငယ်ညစ်ညမ်းလူငယ်နမူနာများတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုမကြည့်လိုချင်။ ဆန္ဒရှိသည်။ ကလေးအထူးကု 2007; 119: 247-57 ။
 Rideout VJ, Foehr UG, Roberts DF ။ Generation M2: အသက် ၈ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်ကြားရှိမီဒီယာများ။ ကယ်လီဖိုးနီးယား - Kaiser မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်း၊ ၂၀၁၀
 Herbenick: D, Hensel: D, Smith NK, Schick V, Reece M, Sanders SA, Fortenberry JD ဆီးခုံမို့မို့ရှိဆံပင်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ - ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိလိင်တက်ကြွသောအမျိုးသမီးများအတွက်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒိုင်ယာရီလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များ။ J ကိုလိင် Med 2013; 10: 678-85 ။
McBride KR၊ Fortenberry JD ။ လိင်ကွဲလိင်စအိုနှင့်စအိုလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ J ကိုလိင် Res 2010; 47: 123-36 ။
 Mattebo M, Larsson M, Tydén T, Häggström-Nordin E. ပညာရှင်များသည်ဆွီဒင်ဆယ်ကျော်သက်များအပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အမြင်များ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသူနာပြု 2014; 31: 196-205 ။
 Vannier SA, Currie AB, O'Sullivan LF ။ ကျောင်းသူ / သားများနှင့်ဘောလုံးမိခင်များ - အခမဲ့“ ဆယ်ကျော်သက်” နှင့်“ MILF” အွန်လိုင်းအပြာစာပေများကိုအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ J ကိုလိင် Res 2014; 51: 253-64 ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Mitchell A၊ Smith A၊ Carman M, Schlichthorst M, Walsh J, Pitts M. လိင်ပညာရေးပညာရေး။ မဲလ်ဘုန်းမြို့ - လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် La Trobe တက္ကသိုလ်ရှိသြစတြေးလျသုတေသနစင်တာ၊ ၂၀၁၁ ။
 Mitchell A၊ ပက်ထရစ် K၊ Heywood W၊ Blackman P၊ သြစတြေးလျအလယ်တန်းကျောင်းသားများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစစ်တမ်း ၂၀၁၃။ မဲလ်ဘုန်းမြို့ - လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် La Trobe တက္ကသိုလ်ရှိသြစတြေးလျသုတေသနစင်တာ၊ ၂၀၁၄
 Hare K၊ Gahagan J၊ Jackson L, Steenbeck A. 'porn' ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - လူငယ်များလိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအင်တာနက်ရုပ်ရှင်များကိုစားသုံးခြင်းသည်ကနေဒါလိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမြှင့်တင်မှုချဉ်းကပ်မှုကိုမည်သို့အကြောင်းကြားနိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ အစွန်းရောက်ကျန်းမာရေးလိင် 2015; 17: 269-83 ။
Shoveller J၊ ဂျွန်ဆင်ဂျေ။ အန္တရာယ်များသောအုပ်စုများ၊ အန္တရာယ်များသောအမူအကျင့်များနှင့်စွန့်စားနိုင်သောသူများ - လူငယ်လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောဟောပြောချက်များကိုလွှမ်းမိုးထားသည်။ Crit ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး 2006; 16: 47-60 ။
 သြစတြေးလျကလေးများနှင့်လူငယ်များအတွက်သုတေသနမဟာမိတ်အဖွဲ့ (ARACY) နှင့်နယူးဆောက်ဝေးလ်ကလေးများနှင့်လူငယ်များအတွက်ကော်မရှင် (CCYP) ကလေးသူငယ်များနှင့်လူငယ်များကိုသုတေသနပြုခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း - စာတမ်းတစ်ခုနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်သည့်အဖွဲ့မှထင်ဟပ်ချက်များ။ သြစတြေးလျ - ARACY & NSW CCYP; 2008 ။